မြန်မာကလေးများ၊ အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် စကာင်္ပူကျောင်းများ (၂) – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ and tagged education, future, myanmar youths. Bookmark the permalink.
← မြန်မာကလေးများ၊ အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် စကာင်္ပူ ကျောင်းများ-၁
ကြံကြီးစည်ရာ….. (ဒါပေမယ့် ဒါလည်း ပညာတဲ့) →
4 thoughts on “မြန်မာကလေးများ၊ အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် စကာင်္ပူကျောင်းများ (၂)”
ရွှေအောင် | November 3, 2008 at 3:33 am
မြန်မာတွေဟာ ဘယ်လောက်အခြေအနေဆိုးဆိုး ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို တော့ပြန်ချင်ကြတာတော့ အသေအခြာပဲ အမရေ..
ဒါပေမယ့်တစ်ချို့လဲ အခွန်ကြောင့်ဆိုပြီး တခြားနိုင်ငံသားခံယူသွားသူတွေရှိပါတယ်..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ.. နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်လာချိန်မှာ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကမြန်မာတွေ ပြန်လာပြီး အနာဂတ်နိုင်ငံတော် အတွက် ပါဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်…..
ကုမ်ရာသီသူ | November 3, 2008 at 7:42 am
အင်း…………. လို့ပဲ သံရှည်ကြီးဆွဲပြီး ဖြေပါရစေတော့၊ မျှော်လင့်မိတာပါပဲ။ ပါဝင်ခွင့် ရနိုင်၊ သုံးနိုင်ကြပါစေလို့။
Kay | November 3, 2008 at 8:07 am
အချိန်တန်ရင် အမိမြေကအိမ်ကိုပဲပြန်ချင်တာပါ။ မစွန့်လွှတ်နိုင်ပါဘူး။
အမပြောတဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ကြမယ့်အချိန်၊ ပတိရူပဒေသဖြစ်မယ့်အချိန် အမြန်ဆုံးရောက်ပါစေ လို့ပဲ ဆုတောင်းနေပါ့မယ်။
layma | November 20, 2008 at 11:28 am
စိတ်ကမစွန့် နိုင်ပေမယ့် အခြေအနေအရပ်ရပ်က ဖိအားပေးလာတဲ့အခါ မွေးရပ်မြေဆိုတာ အလည်ပြန်စရာနေရာတစ်ခုသာသာ.. ရင်ထဲမှာ လွမ်းဆွတ်အောက်မေ့ဘွယ် တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ ပဲ…
ဒီအဖြစ်တွေ ဘယ်တော့ လွန်မြောက်မလဲမသိဘူး.. အစ်မရေ…။